Sock. Izy ireo dia mety ho maro loko, fluffy, na mihantona tsara eo amin'ny chimney. Izy ireo dia manampy amin'ny fiarovana ny tongotra amin'ny blisters sy ny fofon'ny kiraro. Mety ho tena stylish sy mendrika izany izy ireo! Ho an'ny mpihazakazaka, ny kiraro dia manome fampiononana sy fiarovana lehibe. Ny kiraro tsy mety dia mahatonga ny tongotra hilentika amin'ny hatsembohana ...
Isan'andro mandehandeha ianao dia hanery ny tongotrao. Raha miasa mandritra ny tontolo andro ianao dia mila vahaolana ba kiraro izay afaka mitroka ny hamandoana ary mijanona ho mahazo aina mandritra ny fiatoana sy ny ora fanampiny. Ny ba kiraro tsara indrindra anaovana baoty dia mipetaka mba hiantohana ny fampiononana, hitazonana ny tongotrao ho maina, ary hisorohana ny ho...
Ahoana ny fomba hahitana ny bra fanatanjahan-tena tsara indrindra izay manome fanohanana mety amin'ny fanatanjahan-tena
Amin'izao fotoana izao, ny fitadiavana akanjo fanatanjahan-tena dia tsy sarotra. Minitra vitsy monja ao amin'ny Instagram dia hitondra doka sasantsasany momba ny leggings tsara indrindra, ny akanjo mifanentana tsara indrindra, na ny bra fanatanjahan-tena tsara indrindra. Toy izany koa, ireo magazay lehibe dia afaka mividy mora foana akanjo fanatanjahan-tena amin'ny $10 na $15. Fa ny mahita ny tena durb...